Cities Beautiful Si Booqo In Austria Oo Italy By Rail | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Cities Beautiful Si Booqo In Austria Oo Italy By Rail
Iyada oo profiles badan oo sare, dalalka caan ah sida France, Germany, iyo Switzerland, layaabna ma leh Austria aan la qaadan dareenka badan! Waayahay, Italy marnaba run ahaantii dhaceen map-ka, laakiin wadada tareenka ka Austria in Italy hubiyo in la dayacay. laakiin, taasi oo ku saabsan in la beddelo! Austria iyo Italy by rail waa mid ka mid ah ugu waayo-aragnimada la yaab leh Weligaa ma ka heli doonaa in ay ka markhaati.
Iyo tuulooyinkoodii quaint buurta ay, mesmerizing dabiiciga ah soo jiidashada, iyo naqshadda dhismaha magaalada haybad, waxaad heli doontaa cajiib ah Europe safar. Tareenada Austria ayaa ka mid ah ugu horumarsan ee Yurub oo dhan, tareenada habeenkii waa qaab top (iyadoo jidka ag fadhida, tareenada habeenkii waxay leeyihiin oo dhan wadooyinka isku sida tareenada maalin samayn), badankiisu ma u baahan Boos sare iyo waa cajiib raaxo!
Sidaas, ha sugin wax ka badan: bilowdo sahaminta Austria iyo Italy by rail adigoo booqanaya magaalooyinka qurux badan:
Bilow aad Austria iyo Italy by safarka tareenka la Vienna
Bilow aad Austria iyo Italy by rail farxad ayadoo marka hore la hubin soo baxay caasimada haybad Austria ee. Vienna yeelato taariikhda, soo jiidashada oo quruxduna enjineer!
Lumaan barareyso kor matxafyada Austria ee maalintii, isku day dhaqanka Vienna kafeega iyo Sachertorte in la afuufo doonaa maskaxdaada! Fiiri Vienna ayaa ugu cadcad sida Opera Vienna State iyo Schonbrunn Palace (iyagu waa waadaxa ah waa-arki!). Iyadoo ku xiran wadada tareenka aad rabto in aad qaadato, labada tag Salzburg oo Hallstatt si toos ah ama madaxa dhinaca Graz.
Tan iyo Vienna-Graz ayaa line a rail toos ah, joojiyaan in Graz iyo Klagenfurt aad jidka ka Vienna si Venice. Ha ka tegin Graz aan booqday Schlossberg ah. Tani waa buur dhexe ee magaalada yaqaan for dhismaha saacadda caanka ah iyo qalcaddayda a. Hadaad kujirto qaab wanaagsan, fuul jaranjarada ka Schlossbergplatz ama isticmaal wiishka oo keliya. Just soo socda si Schlossbergplatz waa taariikhiga Kastner und Ohler Shopping dhexda - ka eeg maqaayadaha saqafkooda.
On jidka aad u Idaacadda, ku soco jidadka xarunta, iskuna day mid ka mid ah baraf-kareemada fiican weligaa! “Ice Geissler” in Sporgasse saarta jalaato organic in yimaado dhadhan xad-dhaaf ah oo waa super delicious! Your Austria iyo Italy by safarka tareenka waxaa kor u eegay by daqiiqadii, ma aha waxa ay?
Joogitaankeena soo socda ee Austria iyo Italy By Rail waa Venice, Marka aad gaarto Italy, aad dalka reer gorgeousness galay! Hoyga in Venice waa qaali, si ay u shaqayso oo aad raalli iga haddii aad deggan tahay hal maalin oo kaliya. Ha ku dhumin waqti aad laakiinse waxaad u samaysaa sida ugu badan ee suurto gal ah in muddo gaaban. A gondola doon safar yahay waajib ah! FYI, waxa ay sidoo kale waa mid aad u qaali ah. Filo in ay bixiyaan oo ku saabsan 80 EUR safar gondola 30-daqiiqo ah oo ku saabsan 120 EUR for a 45 hal daqiiqo. Markaasuu, tegayaa hubi Ponte di Rialto - mid ka mid ah ugu buundooyinka caan in Venice. Waxay u dhexeeysa Canal Grand ah, oo waxay ku dhow yahay inuu di Ponte ku Rialto. On jidka aad ku saldhiga tareenka, Koosaar ee stunningly qurux Piazza San Marco, loo yaqaan Saint Mark's Barxad.
Bolzano in Tareenadu Venice
Vienna si ay Tareenadu Venice
Trieste in Tareenadu Venice
Udine in Tareenadu Venice
Oo joojiyaan Austria iyo Italy By Tareenka ee Florence
On aad Austria iyo Italy by safar rail, aad noqon doonaa in ay tahay joojiyaan in Florence. maalin ama laba ee magaalada this buuxiyey oo la taariikhiga ah, farshaxanimo, iyo ahmiyada diineed waa sixir saafi ah. The wax ugu horeysay si aad u aragto yihiin The Basilica iyo Biyac of Santa Maria Novella. Waxay ammaanta badan oo u dhow xarunta tareenada yihiin! Waxaa sidoo kale jira piazza qurux badan oo ficil ahaan had iyo jeer dadku ka buuxo. Markaasuu, guurto gal weyn Santa Maria del Fiore iyo qubbad wayn. Fiiri Basilica ee Santa Croce iyo Basilica di San Lorenzo iyo Medici Chapels sidoo.
Nasasho qaado ka yimid Austria iyo Italy By Rail dalxiis iyo madaxa u Market San Lorenzo waayo deg deg ah oo cuntada delicious! Suuqa Tani waa meel dadka deegaanka 'jecel si ay u dukaameystaan ​​iyo cunto fudud! Sidaas, waxaa laga yaabaa in iibsato qof xusuus ah a lahaa ka dib markii aad ku riyaaqay aad qadada? Haa! Ha ka tegin Florence aan booqday Uffizi ah, Accademia ah, Palazzo Vecchio ah, iyo Pitti Palace ee. Kuwanu waa matxafyada waaweyn magaalada. Sidoo kale, bixiso booqasho uu ku Boboli jannada ku xiga, jardiinooyinka ugu quruxda badan waligaa waad arki doontaa.
Your stop xigta waa Rome. Well, aad u ogaato wixii ay halkaas ku sameeyo ... iyo haddii aadan u hubiso our Italy looxyada Pinterest.
Bologna si ay Tareenadu Florence
Livorno in Tareenadu Florence
Ravenna in Tareenadu Florence
Waayo, Austria ugu yaab iyo Italy by waayo-aragnimo rail, Soo gal Save tareen A for ugu dhaqsiyaha badnaa iyo habka ugu miisaaniyad-saaxiibtinimo si ay u helaan tikidhada tareenka aad!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcities-austria-italy-rail%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#travelaustria tareen safarka safarka tareenka travelaustria travelitaly
Nockherberg Starkbierfest – Munich Beer Festival Strong